Masinina fampifangaroana TDPM Series Ribbon
SHANGHAI TOPS GROUP CO., LTD dia manana karazana milina fampifangaroana vovoka mba hahafeno ny fepetra takiana amin'ny fahaiza-manao, ny fitaovana fampifangaroana vovoka maina no fitaovana fampifangaroana malaza indrindra amin'ny vidin'ny fikojakojana ambany. Izy ireo dia azo ampiasaina amin'ny fampifangaroana saika ny vovo-dronono & vokatra Granule toy ny fanafody, fanafody, ary vokatra avy amin'ny sakafo isan-karazany, zezika, stucco, tanimanga, tany poti, loko, plastika, zavatra simika, sns. Ny milina fampifangaroana vovoka voaomana tsara dia somary haingana ny mifangaro ary mora entina sy alefa.
Fanamiana mifangaro tsara
Izy io dia misy kofehy anatiny sy ivelany izay manome fikorianana mifanohitra amin'ny lalana raha mitazona ny vokatra mihetsika hatrany mandritra ny sambo. Ny kofehy ao anatiny dia mamindra ireo fitaovana mankany amin'ny faran'ny masinina fampifangaroana kofehy ary ny kofehy ivelany kosa mamindra fitaovana mankany amin'ny fivoahan'ny masinina mifangaro vovoka. Izay afaka mahavita mampifangaro fanamiana CV fanatsarana ＜ 0,5%
(Ny tanjon'ny fampifangaroana dia ny fananana fifangaroan-javatra mitovy amin'ny homogenous ary nofaritan'ny Coefficient of Variation (CV) naseho isan-jato:% CV = Standard Deviation / mean X 100.)
Fotoana fiasana maharitra
Milina fanamboarana kofehy natao tsara, tsy misy ampahany fanampiny sy fotoana iasana maharitra. Ny mixer rehetra dia namboarina mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa. Ny kajikajin'ny agitator sy ny drive dia tanterahina mba hiantohana ny fandidiana maimaimpoana mandritra ny taona maro.
Fampiasana azo antoka
Ny milina fampifangaroana kofehy dia misy fitaovana fiarovana isan-karazany mba hiarovana ny fiarovana ny mpiasan'ny.
Misy switch switch azo antoka eo akaikin'ny fonony, rehefa nosokafana ilay fonony dia hijanona ho mandeha hatrany ilay masinina.
Mandritra izany fotoana izany, ny tapany ambony amin'ny vatan'ny tanky dia manana fantsom-piarovana, izay afaka miaro ny fiarovana ny mpandraharaha amin'ny fatra lehibe indrindra.
Kilasy fiarovana ny fahadiovana
Ny sanganasa rehetra dia mifamatotra amin'ny welding tanteraka. Tsy misy vovoka sisa tavela sy diovina mora aorian'ny fampifangaroana. Ny zorony boribory sy ny peratra silika dia manamboatra fonosana milina fanamorana volo mora foana koa diovina.
Azonao atao ny manasa mivantana ny varingarina anatiny an'ny mixer amin'ny rano, na afaka mampiasa mpanadio banga ianao hanadiovana ny atitany.
Vokatry ny famehezana tsara
Ny teknolojia famehezana ny vovo-tsiranoka amin'ny mixer vovoka dia olana ara-teknika foana teo amin'ny sehatry ny mixer, satria ny hazo lehibe dia mamakivaky ny vatana lehibe amin'ny lafiny roa amin'ny mixer ary entin'ny motera. Izany dia mitaky elanelana mety eo anelanelan'ny hazo sy ny barin'ny mixer. Ny fiasan'ny tombo-kase dia ny famelana ny zana-kazo hihazakazaka tsara ao anaty barika mixer tsy misy fanakantsakanana, ary miaraka amin'izay koa, ny fitaovana ao amin'ny mixer dia tsy hikoriana amin'ny rafitra famehezana ivelany amin'ny alàlan'ny banga.
Ny tombo-kasen'ny mixer-tsika mifangaro dia mandray endrika labyrint (nahazo tombo-kase nasionaly ny laharam-pametahana :) ary mandray ny famehezana ny marika Alemanina Bergman, izay mahazaka akanjo sy mateza kokoa.
Ireo fitaovana famehezana dia tsy mila soloina ao anatin'ny telo taona.
Ny famolavolana tavoahangy ambony fonosana fonosana milina fanamoriana vovoka dia azo namboarina araka ny filan'ny mpanjifa. Ny famolavolana dia afaka mifanaraka amin'ny toe-javatra iasana, ny varavarana fanadiovana, ny seranan-tsakafo, ny seranan-tsambo ary ny seranana fanesorana vovoka dia azo apetraka araky ny fisokafan'ny asa. Eo an-tampon'ny vovo-pandrefesana mifangaro vovoka, eo ambanin'ny sarom-bilany, misy harato azo antoka, afaka misoroka ny fahalotoana mafy hidina ao anaty fitoeran-javatra mifangaro izy ary afaka miaro ny mpandraharaha soa aman-tsara. Raha mila enta-mavesatra ianao amin'ny mixer mix, dia azonay atao ny manamboatra ny fanokafana ny sarom-baravarankely rehetra amin'ny famoahana azy amin'ny tanana. Azontsika atao ny mahafeno ny fepetra takiana aminao.
Differnt fomba famoahana safidy hisafidianana
Ny valizy fampifangaroana kofehy dia azo entina amin'ny tanana na amin'ny pneumatic. Valve azo avela: valve varingarina, valizy lolo, valizy mivantana sns.
Rehefa misafidy ny famoahana ny pnemika dia ilaina ny compresseur rivotra hanomezana loharano rivotra ho an'ilay milina. Ny famoahana tanana dia tsy mila compresseur rivotra.
Modely samihafa hisafidianana
SHANGHAI TOPS GROUP CO., LTD dia manana karazana mixeur mifangaro isan-karazany mba hahafeno ny fepetra takian'ny fahaizany.
Ny maodelintsika kely indrindra dia 100L, ary ny maodely lehibe indrindra dia azo namboarina ho 12000L.
Raiso ohatra ny mixer 100L. Afaka mamoa lafarinina 50kg eo ho eo ve? Ny fe-potoana fampifangaroana vovo-dronono dia 2-3 minitra isaky ny mandeha.
Ka raha mividy mixer 100L ianao dia ny fahaizany dia: ataovy ao anaty ilay mixer tokony ho 5-10mins /, ny fotoana fampifangaroana dia 2-3 minitra, ary ny ora famoahana dia 2-3 minitra. Ka ny totalin'ny fotoana fampifangaroana 50kg dia 9-16 minitra.
Fampahalalana modely samihafa
Ny tontonana fanaraha-maso Anglisy dia mety amin'ny fandidiana anao. Misy ny switch of "Main power" "Stop stop" "Power ON" "Power OFF" "Discharge" "Timer" Ao amin'ny tontonana fanaraha-maso.
Izay tena mora sy mahomby hiasa.
Farano takelaka & Vatana amin'ny vy tsy misy fangarony, vy mahazatra 304 ny vy mahazatra, misy vy 316 tsy misy fangarony.
Hazo mifangaro vy tsy mifangaro.
Fitaovana / fanaraha-maso kely fampiasa amin'ny mpiambina ny rantsan-tànana.
Azo apetaka amin'ny gorodona mezzanine na eo amin'ny sehatry ny finday.
Ny kofehin'ny zoro anatiny sy ivelany dia azo ampiasaina amin'ny fampifangaroana haingana sy tena mahomby.
Fameram-potoana ho an'ny fifangaroana miverimberina.
Kodiarana azo hidina finday.
Famolavolana fanadiovana voamarina.
Motera mandeha mivantana.
A: Hafainganana azo ovaina avy amin'ny VFD
Ny milina fanamoriana vovoka dia azo namboarina ho azo ovaina amin'ny alàlan'ny fametrahana mpanova matetika, izay mety ho marika Delta, marika Schneider ary marika hafa nangatahina. Misy bokotra rotary eo amin'ny tontonana fanaraha-maso mba hanitsiana ny hafainganana mora foana.
Ary azonay atao ny manamboatra ny herinaratrao eo an-toerana ho an'ny milina fampifangaroana kofehy, ampanjifaina ny motera na ampiasao VFD hamindra ny herinaratra hahatratra ny takian'ny volanao.
Mba hanamorana ny fiasan'ny masinina fampifangaroana kofehy indostrialy. Matetika mixer maodely kely, toy ny 100L, 200L, 300L 500L, hampiana amin'ny tohatra mankany amin'ny famatrarana, blender maodely lehibe kokoa, toy ny 1000L, 1500L, 2000L 3000L ary ny blender ho an'ny volavola lehibe kokoa, mba hampitaovana amin'ny sehatra miasa miaraka amina dingana, dia izy ireo fomba roa fanoratana tanana. Raha ny momba ny fomba famoahana mandeha ho azy, dia misy karazana fomba telo, ampiasao ny feeder visy hampidirana fitaovana vovoka, ny ascenseur amin'ny siny ho an'ny famoahana granules dia misy daholo, na ny feeder vacuum hampidirana vokatra vovoka sy granules ho azy.
Ny milina fampifangaroana kofehy vita amin'ny kofehy dia afaka miasa amin'ny conveyor visy, hopper fitehirizana, filler auger na milina famonosana mijidina na milina famonosana, masinina fanidiana ary masinina fanoratana mba hamoronana tsipika famokarana hamonosana vovoka na granules ao anaty harona / tavoahangy. Ny tsipika iray manontolo dia hifandray amin'ny fantsom-pandrefesana silipo malefaka ary tsy hanana vovoka hivoaka, mitazona ny tontolon'ny asa tsy misy vovoka.
D. Fampiasana fanampiny azo fidina
Indraindray ny milina fanamoriana kofehy helika dia mila asiana fiasa fanampiny noho ny filan'ny mpanjifa, toy ny rafitry ny palitao ho an'ny fanafanana sy ny fampangatsiahana, ny rafitra fandanjana mba hahalalana ny lanjany, ny rafitra fanesorana vovoka mba hisorohana ny vovoka dia miditra amin'ny tontolon'ny miasa, ny rafitra famafazana manampy fitaovana maloto sy ny sisa.
1. Mpanamboatra milina fampifangaroana vovo-dronono ve ianao?
Shanghai Tops Group Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2011, dia iray amin'ireo mpamokatra masinina mifangaro vovoka ao Shina, ny milina fanangonana ary ny fampifangaroana blender dia famokarana lehibe. Nivarotra ny masininay tamin'ny firenena maherin'ny 80 manerana an'izao tontolo izao izahay tao anatin'ny folo taona lasa ary nahazo valiny tsara avy amin'ireo mpampiasa farany, mpivarotra.
2. Mandra-pahoviana no mitarika ny fotoana ny milina fanosotra vovo-vovoka?
Ho an'ny milina fampifangaroana modely mahazatra, ny fotoana itarihana dia 10-15 andro aorian'ny nahazoanao ny vola aloanao. Raha ny amin'ny mixer namboarina dia 20 andro eo ho eo aorian'ny fahazoana ny vola apetrakao no mitarika fotoana. Toy ny môtô ampanjifaina, ampanjifaina ny fiasa fanampiny sns ... Raha maika ny kaontinao dia afaka mandefa azy izahay ao anatin'ny herinandro aorian'ny fiasana mihoatra ny ora.
3. Ahoana ny momba ny serivisin'ny orinasanao?
Izahay Tops Group dia mifantoka amin'ny serivisy mba hanomezana vahaolana tsara indrindra ho an'ny mpanjifa ao anatin'izany ny serivisy alohan'ny varotra sy ny serivisy aorian'ny fivarotana. Manana milina fitahirizana entana ao amin'ny efitrano fampisehoana izahay hanaovana andrana hanampiana ny mpanjifa mandray fanapahan-kevitra farany. Ary manana agents koa izahay any Eropa, afaka manao fitsapana amin'ny tranokalanay izahay. Raha mametraka kaomandy avy amin'ny masoivohitray Eraopa ianao, dia afaka mahazo serivisy aorian'ny fivarotana amin'ny toerana misy anao. Izahay dia miahy foana ny fihazakazaky ny mixer-nao ary ny serivisy aorinan'ny varotra dia eo anilanao hatrany mba hiantohana ny zava-drehetra mihazakazaka tonga lafatra amin'ny kalitao azo antoka sy ny fahombiazany.
Mikasika ny serivisy aorian'ny varotra, raha toa ka mametraka baiko avy amin'ny Shanghai Tops Group ianao, ao anatin'ny fiantohana herintaona, raha misy olana ny blender, halefanay maimaim-poana ireo ampahany ho an'ny fanoloana, ao anatin'izany ny sarany mazava. Aorian'ny fiantohana, raha mila faritra hafa ianao dia homenay anao ny vidiny miaraka amin'ny vidiny. Raha sendra misy ny lesoka nataonao, dia hanampy anao izahay hiatrika izany amin'ny fotoana voalohany, handefasana sary / horonan-tsary ho fitarihana, na horonantsary mivantana an-tserasera miaraka amin'ny injenieranay ho fampianarana.
4. Manana fahaizana mamolavola sy manolotra vahaolana ve ianao?
Eny, ny asa lehibe ataontsika dia ny manao ny tsipika famokarana entana rehetra ary namboarina arakaraka ny fangatahana samihafa.
5.Manana ny taratasy fanamarinana CE ve ny masinina fampifangaroanao vovo-doko?
ENY, Ny masinina rehetra dia ekena amin'ny CE, ary manana fanamarinana CE.
Ankoatr'izay, manana patanty teknika vitsivitsy amin'ny famolavolana masinina mifangaro vovoka izy ireo, toy ny famolavolana tombo-kase tombo-kase, ary koa mpameno endrika auger sy endrika hafa fisehoan'ny masinina, famolavolana vovoka.
6. Inona avy ireo vokatra azon'ny mixer fangaro mixer?
Ny mixer amin'ny fangaro amin'ny kofehy dia be mpampiasa amin'ny dingan-javatra famokarana vovoka amin'ny sehatra maro, toy ny simika, fanafody, sakafo ary sehatry ny fananganana. Izy io dia mety amin'ny fampifangaroana karazana vovoka, vovoka amin'ny ranon-javatra kely, ary vovoka amin'ny granule.
Tsindrio eto raha hijery raha afaka miasa amin'ny mixer mixing ribbon ny vokatrao
7. Ahoana no fiasan'ny masinina fampifangaroana kofehy indostrialy?
Miasa pricinple masinina fampifangaroana kofehy indroa dia, Ny kofehy ivelany manosika ny fitaovana avy amin'ny lafiny roa mankany afovoany, ary ny kofehy anatiny manosika ny fitaovana avy eo afovoany mankany amin'ny andaniny roa mba hahazoana fifangaroana mandaitra avo lenta, ny tadivavarana manokana ataontsika dia mety hahatratra tsia zoro maty ao anaty tanky mifangaro.
8. Ahoana ny fomba hisafidianana milina fanamoriana kambana roa?
Alohan'ny hisafidianana milina fanamoriana kambana roa, azafady mba hamafiso raha mety ny mpampifangaro kofehy.
Ny milina fanamoriana kofehy indroa dia mety amin'ny fampifangaroana vovoka na granule isan-karazany miaraka amin'ny hakitroka mitovy ary tsy mora tapaka. Izy io dia tsy mety amin'ny fitaovana izay hitsonika na hihitsoka amin'ny hafanana avo kokoa.
Satria tsy mitovy ny fitsipiky ny asa. Ny milina fanamoriana kofehy dia mamindra ireo fitaovana amin'ny lalana mifanohitra aminy mba hahatratrarana ny fahombiazan'ny fifangaroana. Fa ny milina fanamboarana paddle kosa dia mitondra fitaovana avy any ambanin'ny tanky ka hatrany ambony, hahafahany mitazona ny fitaovana feno ary tsy hampiakatra ny maripana mandritra ny fifangaroana. Tsy hanao fitaovana misy hakitroky lehibe kokoa hijanona eo amin'ny farany ambany tank.
Raha vao manamarina ny fampiasana ny blender ribbon dia tonga amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny maodelin'ny volavola. Ny milina fampifangaroana kofehy avy amin'ny mpamatsy rehetra dia manana habetsahan'ny fampifangaroana mahomby. Raha ny mahazatra dia manodidina ny 70%. Na izany aza, misy ny mpamatsy sasany milaza ny maodelin'izy ireo ho totalin'ny fampifangaroana, raha toa kosa ny sasany toa anay dia miantso ny maodelin'ny milina fampifangaroanay fatratra ho toy ny habetsahan'ny fampifangaroana mahomby.
Ohatra, ny mpanamboatra TP dia mamokatra lafarinina 500kg isaky ny andiany, izay ny refiny dia 0,5kg / L. Ny vokatra dia 1000L isaky ny andiany. Ny tadiavin'i TP dia milina fanakaloana fantsona 1000L. Ary mety ny maodely TDPM 1000.
■ Kalitaon'ny fangaro vovoka
Ny farany nefa ny tena zava-dehibe dia ny misafidy milina fampifangaro vovoka manana kalitao avo lenta. Ny teboka teknika lehibe amin'ny milina fampifangaroana dia mora ny manadio sy ny valin'ny famehezana tsara.
1. Brand of fonosana gasket dia German Burgmann izay mateza kokoa sy mahazaka akanjo.
Izy io dia afaka miantoka ny tombo-kase tombo-kase tsara sy ny famehezana ny tombo-kase. Araka ny aseho amin'ny horonantsary fonosana, tsy misy famoahana rehefa mizaha rano.
2. Teknolojia mihodina tanteraka amin'ny milina fampifangaroana rehetra aseho amin'ny horonantsary mifatotra. Tsy misy banga amin'ny fanafenana vovoka, mora diovina. (Mety miafina ao anaty elanelana welding ny vovoka ary mihodina ho ratsy na dia mandoto vovoka vaovao aza nefa tsy misy fikarakarana feno.)
3. 99% fampifangaroana fitoviana amin'ny 5-10 min.